Thebọchị 30 ahụ ọ na-arụ ọrụ ịma aka? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Push up ịma aka - viable solutions
Push up ịma aka - viable solutions
Thebọchị 30 ahụ ọ na-arụ ọrụ ịma aka?
Nke a30-Day Pushup llema AkaGa-eme Ka I Dịkwuo Ike.Ibili eludị mfe nke na ihe niile gbasara mmadụ niile nwere ike ọ dịkarịa ala ịnwalemeeha — ma ha bụkwa ụzọ dị mma iji wulite ume na akwara, n'agbanyeghị ọkwa ọzụzụ gị.Ọnwa Atọ 1, 2021
Anyị kpọrọ asị imebi gị, ma ọ dịghị onye na-enwe mmasị mara mma ogwe aka. Kwesighi inwe ịnụ ọkụ n'obi nke ukwuu ka ị maa mma, mana nyocha na-egosi oge na oge ọzọ na ụmụ nwanyị na-ahọrọ ụmụ nwoke ndị opekata mpe ihe dabara adaba na-egosi na ụmụ nwanyị anaghị enwe mmasị n'ụdị 'buff bodybuilder'. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịbawanye mma nke anụ ahụ ntakịrị, mgbe ahụ anyị nwere nnukwu ihe ịma aka nye gị taa.
Ọzọkwa anyị na-etinye ọkacha mmasị gị na onye kachasị mkpa anyị nyere onye edemede maka mmụba sayensị gị, taa anyị na-ama ya aka ime ọgbụgba iri atọ kwa ụbọchị maka ụbọchị iri atọ! Maka sayensị! 1bọchị 1: Amaara m nwa oge site na nsogbu a, ya mere maka mgbanwe ọ bụghị nnukwu ihe ijuanya dịka ihe ndị a na-abụkarị. Agbanyeghị, ihe kpatara m jiri mara ihe ịma aka ahụ dị mfe: Anaghị m ahụ mma. M na-emega ahụ oge niile ma na-adị n'ụdị, mana iji nweta ezigbo nsogbu nke ihe ịma aka a, achọpụtara m na ọ bụ ihe ziri ezi iji gbalịa belata ogo ahụike m tupu oge eruo, ebe ọgbụgba iri atọ anaghị abụkarị nnukwu nsogbu.
N'ihi ya, akwụsịrị m imega ahụ ọnwa abụọ tupu mgbe ahụ wee ghọọ ngụkọta ndina ndina. Ọ bụrụ na ị bụ onye nsogbu ndị a, ị nwere ike ịmaraworị ihe gbasara ndụ mmekọrịta m na eziokwu na enyi m nwanyị bụ ahụike na ahụike hụrụ n'anya. Anyị na-arụkọ ọrụ ọnụ ma ọ na-atọ ụtọ ikiri ka ọ na-aga mgbatị ahụ ma ọ bụ na-agba ọsọ mgbe m na-etinye ụkwụ m elu.
Pushups abụghị onye ọbịa nye m. Afọ isii ndị agha pụtara na m mere ọtụtụ ọkpọ ọkpọ na ọtụtụ ụdị mgbali dị iche iche. Ọ bụ n'ezie ụzọ dị mfe ma dịkwa irè iji meziwanye ike gị dị elu, ọkachasị mgbe ịmalitere ijikọ ọdịiche dị iche iche nke nrụgide iji rụọ ọrụ akwara dị iche iche.
M na-emekarị 9 set nke esiri-acha ọkụ na atọ ọdịiche mgbe na-agbagọkwa na-eme 90 pushups, ọkara bụ mgbe pushups na ndị ọzọ na ọkara bụ diamond pushups nke bụ ihe siri ike karịa maka iri isii ụbọchị m maa anaghị atụ anya ịta m ahụhụ ọzọ , n’ihi na izu ole na ole ndị mbụ na-abụkarị ihe kacha sie ike mgbe ị na-ewuli ike gị. Emechaala m nke mbụ nke iri atọ na ntanetị taa na njedebe m mechara mee, na-erughị na nke ikpeazụ. Echere m na m maa eleda anya ike ị nwere ike ida na ụbọchị iri isii.
Echere na nke a ga-abịaru ọkwa ahụike nke onye na-anwale ihe ịma aka a na-enweghị ọtụtụ mgbatị ahụ ma nwee olile anya na nsonaazụ ya ga-abụ ihe na-akpali mmụọ maka ndị chọrọ inwe ọdịdị, dị ka mgbe niile, m ga-emelite etu m si eche ma ọ bụ kwa izu. ihe gbanwere, ana m eme iri atọ ugboro otu ụbọchị wee mee nnọkọ ntachi obi na ngwụcha izu ọ bụla ma hụ ọtụtụ m nwere ike ịpụ n'usoro iji hụ etu m siri meziwanye. N'ihi na ọfụfụ anaghị agụta ma ọ bụrụ na ị mee ha nke ọma, ihe m na-elekwasị anya abụghị ọsọ kama na ịme zuru ezu, ọfụma ma ọ bụ na ị na-efu isi. Aga m ahụ gị n'otu izu.
7bọchị 7: you chetara ihe m kwuru na izu ole na ole ndị mbụ bụ nke siri ike iji nwee ahụ ike? Anaghị m egwu egwu. M na-eme iri atọ ugboro ugboro, enweghị nsogbu, mana mgbe ụbọchị iri isii nke mmega ahụ efu, achọrọ m ịtụba mgbe m mere nke ikpeazụ. Ọ na-echetara m mgbe mbụ m na-bootcamp afọ ndị gara aga, M bụ na ezigbo udi mgbe m napụtara, ma m bụ n'ezie adịghị njikere na m na-echeta na-aga n'ókè ebe m gafere na mgbe ụfọdụ hụrụ kpakpando n'anya m.
Ahụghị m kpakpando ọ bụla, mana nke a abụghịkwa picnic, ọ na-esiri m ike ijikwa ọgbụgba iri atọ na-enweghị nkwụsị. Emere m oge marathon m taa wee nweta ọgbụgba iri abụọ na abụọ, ọ bụghị ezigbo nsonaazụ. Kaosinadị, ogwe aka m na-amaliteghachi ịkọwapụta ha, dịkwa ka obi m dị.
Akpọrọ m nkụda mmụọ anụ ahụ ike maka ọnwa abụọ gara aga, ya mere ọ dị mma ịmara na m na-esikwu ike, mana anọ m ebe m bidoro. Naanị maka ị Iụrị ọ Iụ m na-agbalị ịhụ ole diamond push ups m nwere ike ime m mere na ọ na-akwụsị mgbe - ma ọ bụrụ na ị na-eche ihe diamond push acha ọkụ bụ mgbe ị na-etolite a diamond site na iji aka gị Collapse nke mere na gị isi mkpịsị aka izute na-etolite ala n'ọnụ ọnụ diamond na mkpịsị aka gị na-ezukọ iji mepụta elu? dayamọnd Mgbe ahụ ị na - agbada ahụ gị wee bulie ya ọzọ iji jide n'aka na ị na - achịkwa oge niile.
Ọ bụrụ na ị nwere ike ghara ime a push-elu na-na-achịkwa mgbe ahụ ị na-adịghị n'ezie na-eme a push-elu na ị gaghị enweta abamuru nke otu, n'ihi ya, anaghị aghọ aghụghọ n'ule. Nsonaazụ a na-enweta n’izu nke mbụ bụ ntụtụ 32 na nke kachasi elu nke diamond 8 n’usoro. Ọ bụghị ihe ọjọọ, mana nke a ga-abụ ugwu dị elu ịrịgo.
14bọchị 14: Ntugharị kwa ụbọchị enwetala mfe, mana ha agabeghị ije na ogige ahụ. Enwetara m enyi ahụ na-achị ọchị mgbe m na-alụ ọgụ, wee chetaara ya na m na-afụrụ ya ahịrịokwu atọ n'ime ya, nke ọ zara, sị, You're nwere mmasị na mmekọahụ. 'Amaara m na ọ na-egwu egwu, mana m achọ ịma, ọ nwere ike ịrị elu ọkpụkpụ ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ka m chọpụta na nkọwa na-alaghachi na ogwe aka m, mana ahụ m na-aza ahụ ike mgbe niile, n'ihi ya, nsonaazụ gị nwere ike ịdị iche.
Adị m ebughibu site na okike, mana obi m na-amalitekwa ịmalite ịkọwapụta ya, agbanyeghị, mgbe ị tufuru afọ, ị ga-emeso mgbatị ahụ maka na ọ gaghị eme. Emeela m oge marathon m ma mee 36 pushups na 12 diamond pushups ozugbo nke bụ mma dị mma m na-atụ anya na m ga-aga n'ihu na-emeziwanye na agaghịzi m agwa enyi m nwanyị na m nwere 'ogwe aka nwanyị'. Ọ na-ekwu ụzọ kachasị mma isi kpalie m bụ site na nkwado na-adịghị mma na nke ịkwa emo.
21bọchị 21: Pushups na-agwụ ike, mana ekwesịrị m ikweta - mmega ahụ bụ ihe niile. Na ndụ m, m na-adị mma, mana enweghị m mmega ahụ. Amaara m na ụfọdụ ndị na-eme nke ahụ, enyi nwanyị ahụ hụrụ ya n'anya n'ezie - ọ bụghị nsonaazụ ya, m na-ekwu na mmadụ niile hụrụ ya n'anya, mana ezigbo ọgụ ọ na-agba.
Ọ na-amasị m ịdị mma, achọrọ m ịdị ike, mana m kpọrọ mmega ahụ asị. Karịsịa, ana m asị ịgba ọsọ. Agbanyeghị, pushups bụ naanị ihe na-agwụ ike.
Abịala m ebe ọgbaghara iri atọ esighi ike. Ọ ka bụ obere ọrụ, mana enwere m ike iwepụ ha na enweghị nsogbu ọ bụla mgbe izu atọ gachara. Ogwe aka m ji nwayọọ nwayọọ na-akọwawanye, mana amaara m site na ahụmịhe gara aga na ọ bụrụ na ị na-achọ nsonaazụ anụ ahụ, pushups abụghị nnukwu maka nke ahụ, ị ​​ga-achọrịrị mmega ahụ ọzọ.
Pushups dị mma maka iwulite ike, mana mmega ahụ dị mma maka iwulite ike adịchaghị mma maka iwulite mmadụ - enwere ihe dị iche. Offọdụ ụdị kachasị dị elu ma dị egwu ị nwere ike ịma nwere ume na ume dị ntakịrị nke na-abata naanị n'ọkụ. Mụ nwoke ndị nwere akwara na-anaghị akacha ike nwere ike ịnwe ọtụtụ ume ma nwekwa ume karịa ogologo oge.
Nke a bụ ụdị ike ndị agha kacha wee mara, anyị bụ ya kpatara ndị agha ole na ole ji dị ka ndị na - arụ ọrụ n'ahụ - nke ahụ nwekwara ọtụtụ nnukwu ego ga - egbochi gị. Anyị kpọrọ ụmụ okorobịa a 'igosi anụ ahụ' n'ihi na akwara ha bụ maka igosi, ọ bụghị maka ike. Ọ bụrụ na i sonyela, ị ga-ahụrịrị nkọwa ụfọdụ na ogwe aka gị na obi gị, ọkachasị ka ị na-ehulata ogwe aka gị iji mechie mgbe ị na-eburu ihe, mana ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịza aza naanị ịme ihe, ọ gaghị.
mkpa 600 nyochaa
Ga-enwetakwu nkọwa, mana ị gaghị enweta 'nnukwu', ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka mma karịa nkọwa ị ga-agbakwunye ibu efu - ma ọ bụ ọkacha mmasị m: calisthenics. M na-ezere ịdị arọ n'ọtụtụ oge, ma kama ịchọrọ iji ịdị arọ nke ahụ n'onwe ya mgbe enwere ike - nke a na-ewuli ọtụtụ ike na ntachi obi. Emere m nnọkọ marathon m taa wee nweta 46 pushups na 20 diamond pushups niile, ma ọ bụrụ na ị gafee, ị nwere ike ịhụ nsonaazụ yiri ya n'ihe dị ka izu atọ.
Ọ na-adịwanye mfe, dịka m kwuru, ọ na-agwụ ike ugbu a, amaara m na ọ bụrụ na m chọrọ ịdị ike karịa naanị iri atọ n'ụbọchị ọ gaghị ezuru. 30bọchị 30: Oge marathon nke ikpeazụ taa na m mere 55 ọfụma na 24 diamond pushups. Ekwesiri m ime iri isii ma ọ bụrụ na enyi ahụ gụọ ya wee jụ ịgụta ise n'ime ha n'ihi na ọ sịrị na azụ m ezughị ezu amaara m maka eziokwu na azụ m kwụ ọtọ, echere m na ọ na-enwe mmetụ obi, nke pụtara m na-akwa ụta maka inye ya ike ahụ site n'ime ka ọ bụrụ ọkwa m.
Ogwe aka m na obi adịghị eche na ha adịghị ike na noodle dị ka ha mere mgbe ọnwa abụọ nke ndina ndina, ma amaara m na m ka nwere ụzọ dị anya m ga-esi laghachi ebe m nọ. Ọ bụrụ n ’ịkwado maka nsogbu ahụ n’ụlọ, nke a bụ oge dị mma iji tinye ihe dị iche iche na usoro ị na - eme ma ị nwere ike ime ka ọ bụrụ usoro maka ụbọchị ọ bụla iji zere inwe mmetụta dịka ị na - ewepụ akụkụ dị egwu nke ihe ohuru Ihe omumu bu mgbe imalite ịhapụ ubochi o gha adi nfe ịkwụsị kpamkpam. Ọ bụrụ na ịnweghị ọdịnala ọzụzụ siri ike, gbanwee ya kwa ụbọchị ọ bụla iji nye onwe gị ezumike.Ọ bụrụ na ị meela ihe ịma aka anyị ma bụrụ ugbu a dịka m maka izu gara aga, ugbu a bụ oge zuru oke iji gbasaa usoro gị.
Ana m akwado ịzụrụ ụlọ ịdọpụta ụlọ, ọ bụ mmega ahụ dị mfe, dị mfe, na nnukwu nke ga-agbakwunye ike na nkọwa. O siri ike karịa ihe ọ bụla, mana ịhụ nsonaazụ anụ ahụ na-abụkarị ihe mkpali na-aga n'ihu. N’ezie, ọ ga-enyere gị aka mgbe ị nwere enyi nwanyị ọ masịrị gị ịkọwa gị okwu njakịrị banyere ogwe aka obere nwa nwanyị.
Ọ dị njọ ịme 100 push kwa ụbọchị?
Ọ bụrụna-emeka100 Push Upssiri ike maka gị, mgbe ahụ akwara gị ga-achọ ụfọdụ mgbake ma emesịa. Ọ bụrụ na ị na-adọka eriri anụ ahụ ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịgabiga ha, nwee nkụda mmụọ ma eleghị anya ị nwere ike ịnwe mmerụ ahụ. Ọ bụrụ100 Push Upsesiri gị ike, mgbe ahụ ọ ga - abụ obere mgbatị ahụ ike gị.Nọvemba 2, 2016
(upbeat electronic music) - Gịnị bụ ihe Chris Heria, anabatanụ ọzọ vlog irè. Ntughari bu ihe omumu maka ihe omumu nile, iwusi ike na akwara n'ime obi, uzo na ubu ka ha na aru oru na akwara isi. Ọ bụghị naanị na ị na-etolitekwu ike na nkọwa na otu ahụ ike ahụ, mana ị na-emeziwanye mmegharị mmegharị gị, nke sụgharịrị n'ime mmemme ndị ọzọ niile, yabụ ị nwere ike ibuli elu karị ma gaa n'ihu na-aga n'ihu n'ihu ma mechaa zuru planche push-acha ọkụ.
Pushups abughi nani ihe di elu n'inwe ike na akwara, kamakwa enwere ike ime ya ebe obula, ebe obu na ha achoghi ihe obula ma o nweghi ohere obula, n'agbanyeghi egwuregwu i na eme, ma obu ihe ndi mmadu na-eme, ike ike, ịkụ ọkpọ ma ọ bụ ọzụzụ dị arọ, pushups bụ mgbe niile akụkụ nke atụmatụ ọzụzụ nke ndị ọ bụla na-eme egwuregwu na-eme ezigbo ihe kpatara ya. ọ dịkarịa ala, ugboro anọ n’izu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla. Emeela m omume nke ime ya ozugbo m tetara ma nke ahụ enyerela m aka ịbawanye ọzụzụ nke mere ka ọ dịrịkwuo mfe ịme.
Na mbu 100 ọ dị m ka ọ dị ọtụtụ na enweghị m ike ịme ọtụtụ ahụ n'usoro, yabụ na mbido m ga-eme 10 set nke 10 dị iche iche nke pushups maka ngụkọta nke 100 pushups, mana yana ọdịiche dị iche iche Enwekwara m ike ime akụkụ m dị iche iche Ime ka obi m dị ike, akụkụ dị iche iche nke triceps m, isi, na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ m nwere akụkụ dị iche iche na oke dị iche iche. Ma n'ezie, ụfọdụ ntụtụ-nhịahụ siri ike karịa ndị ọzọ na nke ahụ nyeere m aka ịbawanye ume m ma wuo ugboro ugboro. A Na mgbe m nwere ike ime nke ahụ, amalitere m ịme 20 mgbatị n'usoro kama 10, amalitere m ịme ise Kama ịme 10 na 10 na ịba ụba ọnụ ọgụgụ, anyị na-ebelata oge ezumike ma na-abawanye oge dị n'etiti esemokwu maka usoro ọ bụla, na-ewuli ọtụtụ ume na ntachi obi, na ịnweta ọtụtụ ọbara n'ime akwara kama naanị 10 reps nke usoro 10 Anyị ga-eji usoro a iji mee ka anyị kwughachi ma mechaa mee ọ dị mfe ịme 100 pushups kwa ụtụtụ.
Ozugbo i nwere ike ime usoro ise nke ọtụ 20, ị nwere ike ịme ụzọ anọ nke 25 pushups, ụzọ atọ nke 33 pushups, ụzọ abụọ nke 50 pushups, nso na nso na 100 oge ọ bụla. Emechaa 50, 50 nwaa 60, 40, 70, 30, 80, 20, mesịa kụọ 100 n’usoro. Site na nke ahụ ị gaara enwe ike ịkọwapụta akwara dị ukwuu na nrụgide ara.
Ekwuru m na mbụ na m na-eme nke a maka ihe dị ka nkeji anọ na anọ enwere m izu ọ fọrọ nke nta kwa ụbọchị na ihe kpatara nke a bụ na achọghị m ịgabiga akwara nrụgide m ma mepụta ahaghị nhịahụ, Achọrọ m nrụgide m bụ ka o siri ike ka m sere. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ dị ka ihe dị mkpa na-arụ ọrụ na ụgbọ oloko gị - acha ọkụ fọrọ nke nta kwa ụbọchị kwa. Nke ahụ bụ ihe m na-eme ugbu a, ọ bụrụ na m mee 100 pushups, m na-emekwa 100 pullups iji jikọta ya na.
Inwe mmegide gị na ndị na-emegide gị dị ezigbo mkpa, ọ ga - eme ka akwara gị sie ike ma gbochie mmerụ ahụ, mana ọ bụrụ na ị na - ebido na ịpị na ịpị otu ụbọchị nwere ike bụrụ oke olu maka gị, ị nwere ike ịmalite ịmalite otu ụbọchị -ups, otu ubochi. Maka echefula inye ahụ gị ezumike ụbọchị ole na ole, n'ihi na mọzụlụ gị chọrọ oge iji weghachi, ịmaliteghachi na-esiwanye ike ma sie ike, na-azụkwa ndị ị na-adọta, ị nwere ike kewaa ha n'otu ụzọ ahụ, 10 nke 10 ga - ebido ma mechaa bulie ihe ruru ise nke 20 na ihe dịka, dị ka ihe nkwụsị. Na n'ezie, ndọtị, ị na-eji ọtụtụ ihe dị arọ ahụ gị ka ọ na-esiwanye ike, ị nwere ike ịmalite mgbe ọ bụla ị na-eji ihe ndị Australia na-adọta ma ọ bụ na-eme ka ọ dị mfe ma na-eji ụfọdụ n'ime ndị ahụ gụọ ndị 100 na-adọrọ adọrọ ị ghọọ. oops, anyị ga-emekọ ha ọnụ, naanị ihe ị chọrọ bụ ibudata ngwa Heria Pro site na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google, mepee ngalaba mgbatị YouTube ma ị kwesịrị ịchọta usoro a, dịrị njikere ịga, ka anyị bido na mbido, anyị ga - eme 10 mgbanwe-ngbanwe dị iche iche maka 10 reps, 100 ngụkọta ntinye, na ka ị na - eme nke ahụ, ị ​​ga - eme naanị ịme ise n'ime ndị ahụ, 20-ugboro ugboro, anọ 25-ugboro ugboro, na na, ruo mgbe ị ruru 100.
Ọ bụrụ na ị na-elele ugbu a ma bụrụ onye mbido na-enweghị nkụda mmụọ, ụdị nkwụsị ọ bụla dịgasị iche ntụgharị anyị ga-eme ebe a ga-enwe mgbanwe ndị mbido ọzọ ị nwere ike ịme. Onye ọ bụla n'ime ihe omume ndị a nwere ike ịme na elu elu ma dabere na nkuku a na-eji, ga-ebelata ahụ ahụ na nguzogide eji na mmega ahụ iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka onye ọ bụla, naanị họrọ ebe dị elu nwere akụkụ dabara adabara gị na ọ dị mma ịga - fashionable pushups. Ya mere ka anyị gbadata n’ala ma gbaa mbọ hụ na anyị zuru oke n’ịgbagharị a ka ngagharị ndị ọzọ zuru oke.
Ya mere, anyị chọrọ ka aka anyị bụrụ ubu n'obosara, ma anyị chọrọ mkpịsị aka anyị iji kwekọọ n'ọnụ ubu anyị. Chọkwara ịbụ onye kwụ ọtọ na isi gị, mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ gị rue ubu gị, gbam elu, anyị ga-agbadata n'ụzọ niile Bịa. Pụgharịa ozugbo.
Ugbu a ị naghị eme ya You chọrọ ka ikiaka gị ga-apụ apụ ma ị chọghị ka ikpere gị pụọ nke ukwuu, ịchọrọ ime dị ka akuku ụgbọelu. Egwu Heria ♪ Na na na, N’ebe ahụ ka anyị nwere ya. Nke mbu, 10 pushups.
Mgbe ị na-eme mgbanwe dị iche iche nke ịkwanye, ịchọrọ ijide n'aka na ị ga-ejidesi ike na ala yana ị na-agbanye isi gị na a naghị eme ka hips gị dị ala ma ọ bụ karịa. Ya mere, anyị nwere nkwụsịtụ 10, ugbu a ị ga-aga, anyị ga-ebufe ụdị nkwụsị na-esote. Ọ ga-abụ nnukwu push-acha ọkụ.
Yabụ ka anyị were ọnọdụ sara mbara, mkpịsị aka aka, anyị na-abịaru n'obi anyị, kwụghachi azụ, aka gbatịrị agbatị, kpọchie. Nnwere onwe zuru ezu nke ịgagharị, isi okwu, agbatị elu. Ọ dị mma, ebe ahụ ka anyị nwere ọdịiche ọzọ.
Mgbanwe ndị a niile ga-arụ ọrụ ọzọ n'akụkụ dị iche iche nke triceps, obi, na ubu. Ugbu a, ka anyị gaa na mgbanwe ọzọ, anyị ga-aga maka 10 diamond pushups, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ụdị diamond ahụ tinye aka gị ọnụ dịka o kwere mee ma ọ bụrụ na ngagharị ahụ siri ike karịa ịme ya n'otu elu dị elu. Yabụ n'ebe ahụ anyị nwere ya, nke ahụ bụ ọgbụgba 30, anyị nwere naanị 70 fọdụrụ.
Ugbu a, anyị ga - eme ka nsogbu ahụ dịkwuo ntakịrị, mmega ahụ ọzọ anyị ga - amalite ga - abụ ihe mgbawa na - agbawa ọzọ, ọ bụrụ na nke a siri ike, ị nwere ike ịme ya mgbe niile. Ya mere, anyị ga-agbadata ala, kwasie ike dịka anyị nwere ike, ma bulie ala. Kwesighi ịgbada gburugburu ala ma ọ bụrụ na ịnweghị ike, mana ịchọrọ n'ezie iwepụ ihe ọ bụla na-eme iji nye ya ike kachasị. Egwu Heria, Ọ dị mma, ma ọ dị, 40 gbadara, 60 hapụrụ.
Ihe ọzọ anyị ga - abanye ga - akụ aka, ma ụdị dị iche iche a ga - amanye anyị ịkwanye elu ma jiri ike na nkwughachi ọ bụla. Ya mere, ka anyị gaa n'ihu, buru ya gbadaa n'ala, ọ bụrụ na nke ahụ siri ike, mee ya n'elu elu, anyị ga-agbasi ike ka o kwere mee, kụọ aka, laghachite. Egwu Heria ♪ Na na na, ebe anyị nwere kụrụ aka Pushups.
Anyị ga-abanye n'ime ịgba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba ụgbọ mmiri, ma cheta na ụdị mgbanwe a ọ bụla nwere nsogbu nke ya, na-eme ka akwara dị iche iche, na-enwekwa nguzogide nke ya, gbasie, anyị na-enweta ihe ahu ahu na onye ọ bụla N'ịdị nwere karịa tupu na abụọ aka na ụkwụ. Yabụ ọ bụrụ na anyị ga-eme obere ọsọ ọsọ, were obere oge kute ume anyị, kuo ume (iku iku ume) n'ọnụ gị. Ka anyị gbadata n’ala.
Nwere ike ime nke a mgbe niile n'elu elu. Anyị ga-agbadata, jigide otu ogwe aka ọtọ, bia n'ụzọ niile gbagoo, gaa n'akụkụ nke ọzọ. Naanị ị chọrọ imesi ike na otu ogwe aka, ogwe aka nke ọzọ bụ naanị maka nkwado. nkwado Ah, ooh, ooh ♪♪ Ah, ooh, ooh right Ọ dịkwa mma, n'ebe ahụ ka anyị nwere ụta ụta pu sh-acha ọkụ, anyị erutela ebe ahụ ka anyị ga-emechi ike.
Omume ọzọ anyị ga - ebido bụ mmeghe na - emechi emechi n’elu elu. Ya mere, m ga-eji dayamọnd malite ma ọ bụ ị nwere ike ịmalite tere aka, ihe ọ bụla masịrị gị. Nwere ike gbadata, ọ bụrụ na ịnwere ike ịgbasa n'ime oghere, nke ahụ zuru oke, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, ị nwere ike ịpụ apụ, nke ahụ dịkwa mma.
Ka anyị gaa maka 10.ia Heria Music ay Ọ dị mma, ebe anyị nwere ya, anyị nọ ebe ahụ. Anyị emeela 80 pushups na anyị nwere naanị abụọ tent ekpe.
Ngbanwe ọzọ anyị ga - abanye bụ ntinye typewriter. Dịka ị pụrụ ịhụ, achọrọ m iwulite ike gị site na mmega ahụ nke na-etinye ihe ka ukwuu n'ahụ gị n'otu akụkụ, nke na-eme ka isi ike ahụ sie ike ma mee ka ị nwekwuo ike. Ya mere, ka na-aga na ala.
Iji typewriter pushups, ịchọrọ ịnọ ala, yabụ ka anyị were ọnọdụ aka, anyị ga-ebido dị ka onye na-agba ụta, mana anyị ga-adị ala, anyị ga-agafe n'akụkụ nke ọzọ, na-edebe ogwe aka na-emegide ogologo oge ọ bụla Na na na, anyị nwere typewriter push-acha ọkụ. Anyị nọ na nkwụsị ikpeazụ, mmega ikpeazụ ga-abụ ọkpọka, pats na azụ maka 10 reps. Ọzọkwa, wulite ike gị maka ihe ị na-ejikarị aka abụọ eme, ugbu a, anyị na-eme otu, na-eme ka ahụ anyị niile dị elu mgbe anyị biliri.
Ya mere, ka anyị mee ihe nkwugbu, kụọ n’ubu, ka ogwe aka anyị ijide ahụ anyị niile n’otu aka. Oh ♪♪ Oh ♪ Okay, there we have it, 100 pushups, dị mfe dị ka o kwere, na nanị otu a nkeji ole na ole. Ma obuna na nani 10 ugboro iri nke 10, enwere m mgbapụta.
Yabụ ọ bụrụ na ị mere nke ahụ, ekele gị, ị meela 100 ọfụma, ịchọrọ ịnọgide na-eme nke a kwa ụtụtụ. ozigbo ị tetara ma ọ dịkarịa ala ugboro anọ n’izu. N'oge ụfọdụ ị ga-ewulitekwu ahụ ike na ntachi obi, ị ga-enwe ike ịmeghachi ugboro ugboro.
Start malitere ịme usoro ise nke 20 reps, mgbe ahụ usoro anọ nke 25 reps, mgbe ahụ usoro atọ nke 33, ụzọ abụọ nke 50, wee mechaa rụọ ọrụ na nke mbụ, na-abịaru 100 nso, na n'ikpeazụ naanị 100 na set. Ma ọ bụrụ na ịrapara na ya wee nọgidesie ike, ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ nnukwu uru na ike gị na akwara gị, mana ị ga-agakwa na mmega ahụ dị oke egwu ma wulie ike maka mmega ahụ dị elu dịka nke zuru ezu Planche push-acha ọkụ . Nke a bụ mmega ahụ ịchọrọ iji mara maka ịmeghe usoro nrụgide gị.
Yabụ ọ bụrụ na nke ahụ bụ otu ebumnuche gị wee malite ịrụ ọrụ na ya ozugbo. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, jide n'aka na ị ga-akụ bọtịnụ Dị ka, hapụ okwu n'okpuru, mee ka m mara ihe isiokwu na-esote banyere, ma kesaa otu enyi a nke na-eme 100 pushups kwa ga-eme. Ma ọ bụrụ na i mebeghị, jide n'aka na ị debanyere aha.
M biputere ọ bụla otu ụbọchị Thursday na 2 pm, Eastern Time, na ọ bụrụ na ị na-aza ajụjụ n'ime firs t 30 nkeji, ị mgbe niile nwere ohere iji merie free Heria uwe.
Echefukwala inwe mgbatị ahụ na ekwentị gị, yana ịnweta usoro mgbatị onwe m niile nke m mepụtara na ebumnuche a kapịrị ọnụ, dịka abụba na-ere ọkụ mgbe m na-ewusi ahụ ike n'otu oge, yana obere enweghị akụrụngwa, gbaa mbọ hụ na ị bụ onye otu heriapro.com iji rụọ ọrụ mmemme m niile. Wee hụ na ibudata ngwa Heria Pro site na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google ka ị were mgbatị ahụ soro gị.
Enwekwara mgbatị na mmemme mgbatị na-akwụghị ụgwọ na ngwa Heria Pro ka ị nwee ike ịnwale ha tupu ị gawa ị bụrụ onye otu. Maka ndị ọzọ n’ime ọdịnaya m n’izu ahụ, soro m na IG. Akwụkwọ ọ bụla, ana m enye onyinye mgbe niile, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ akụkụ ya, soro m na nchịkọta Instagram Heria nke ị hụrụ na isiokwu ndị ahụ, dị ka ndị na-agba agba, ụdị ọcha ha, ndị na-acha ọcha na-acha ọcha, jaketị , nịịka, na ndị ọzọ.
Ya mere nọrọ na-ekiri na njikere maka dobe na-abịa chrisheria.com na njedebe nke November. Ndi be anyi ekele m unu maka ilee, unu ga-ahu Tọsde na abali abali abuo n’elekere 2, pm, USA, Eastern Time.
Kedu ihe ịma aka 30 Push Up Challenge?
Ọ bụ30-nọdụ mmemme ịbawanye ike ahụ gị na anụ ahụ gị. Ebumnuche nke usoro ihe omume a bụ iji nwayọọ nwayọọ si na-eme isi ma ọ bụ gbanwetụrụ pushups ka zuru na mma pushups n'ime30ụbọchị.Ọnwa Ise 20, 2019
Kedu ihe ịma aka nke 100 pushup?
IheNsogbu Pushups 100bụ kpọmkwem ihe ọ dị ka ya: aịma akaiji wulie ike na ume gị ebe ị nwere ike ime100 pushupsn'usoro. “Ibili elukarịrị ihe omume obi; ha bụ ụkpụrụ ọlaedo nke ịma banyere mkpụrụ akụ́kụ́, ịchịkwa akwara, isi kwụsie ike, ntachi obi, na ume. ”Jun 5, 2018
ịgba ígwè isi mgbatị
Nwere ike dọwara gị mee ndị ọzọ?
Ọ bụ eziena-eme push-acha ọkụka ike ọgwụgwụnwere ikeEnyemakagịiru adọwaraahụ, ha abụghị azịza anwansi n'onwe ha. Ọ bụrụgịchọrọ n'ezienweta shred,gị'I ghaghi ile nri anya ma tinyekwa ụdị mmega ahụ ndị ọzọ.Ọnwa Ise 16, 2019
Ndi 20 pushups a ụbọchị na-eme ihe ọ bụla?
O nweghi njedebeibili eluotunwere ike imen'ime aụbọchị. Ọtụtụ mmadụmeekarịrị 300inupụ otu ụbọchị. Ma maka mmadụ nkịtị, ọbụlagodi 50 ruo 100push-acha ọkụ kwesịrịzuru ezu iji kwado ahụ dị mma nke elu, ọ bụrụhaala na ọ bụmeren'ụzọ kwesịrị ekwesị. Gịnwere ikemalite na20 ntinye aka, mameearaparaghị nọmba a.Abụọ 12, 2019
50 ọ na-eme ka ọ dị mma?
Ọ bụ ya mere ihe dị anyammaihe mgbaru ọsọ karịa ime ọbụna 100 “ihe ọ bụla ọzọ”ibili elubụ gbaa n'ihiiri isezuru okeibili elu. Onye nwere ike imeiri isezuru okeibili elunwere ume ma dabara adaba n'ezie karịa nnọọ onye nwere ike ime ụdị 100 niile jọgburu onwe yaibili elu.Ọnwa Ise 20, 2015
Enwere m ike ịme 300 mkpọtụ otu ụbọchị?
Hameena-arụ ọrụ ọtụtụ akụkụ ahụ dị elu yana ụfọdụ akụkụ ahụ dị ala yana mgbe ejiri ụdị dị mma rụọ ya. Ma mgbe ị na-aga maka reps dị ka elu dị kaOgba 300kaụbọchị, ị na-ebido mọzụlụ gị maka ntachi obi, B NOTGHk nnukwu. Y’oburu n’acho ka ichoro, i ghaghi ibulite ibu i n’etughari, ezi echiche ga-adiibili elu.
Kedu uru nke 100 pushups otu ụbọchị?
Kedu ihe bụurunke imeibili elubụlaụbọchị? Omenalaibili elubara uru maka iwuli elu ahụ. Ha na-arụ ọrụ triceps, akwara pectoral, na ubu. Mgbe ejiri ụdị dị mma mee ha, ha nwekwara ike iwusi azụ na isi ala ike site na itinye (njigide) akwara afọ.Jun 22, 2018
Kedu otu nsogbu ịma aka si enweta ego?
Nsogbu a na-atọ ụtọ bụ ụzọ egwuregwu, mmekọrịta mmadụ na ibe iji bulie ego maka ndị ọrụ enyemaka ahụike ọgụgụ isi n'akụkụ ụwa niile, ma na-emekwa ka ahụike gị na ahụike gị dị mma. Nsogbu Push Up Challenge na-agba gị na ndị enyi gị ume iji mezue ọnụ ọgụgụ ntinye kwa ụbọchị (ego a na-agbanwe kwa ụbọchị na-agbanwe site n'ụbọchị ruo n'ụbọchị iji mee ka mkpịsị ụkwụ gị dị!).
Kedu otu esi eme ụbọchị iri atọ aka mgba?
Gbanwee ihe ị na-asọ site n’otu ụbọchị ruo ụbọchị na-esote ya na otu ndị a dị iche iche 10. Bipụta kalenda ịgbanye ụbọchị 30 dị n'elu ma jiri ya kwa ụbọchị iji nyere gị aka ịnọ na egwu. Mee akara ederede ugboro abụọ kwa ụbọchị, wee chọpụta kwa ụbọchị ka ị mechara ha. Tupu ị mara ya, ọ ga-abụ omume!
Ihe ịma aka dị elu ọ dị mma maka ike ahụ dị elu?
Ihe ịma aka a na-agbanye aka bụ n'ezie ụzọ dị mma iji wulite ike ahụ dị elu. Kale pesto a dị ịtụnanya bụ naanị calorie 210 na ọgaranya oxidant! Iji rite uru ndị a niile dị ịtụnanya, ọ ga-adị mma ma ị gbaa mbọ ihe ịga nke ọma otu ọnwa gafere.